Guubie: Iyo $ 59 Pagore Email Kushambadzira Platform | Martech Zone
Guubie: Iyo $ 59 Pagore Email Kushambadzira Platform
China, Gunyana 26, 2013 Chishanu, June 19, 2015 Douglas Karr
Guubie yakatanga mu beta uye inogona kuzunungusa iyo email kushambadzira nyika nemari yakadzika ye $ 59 pagore, piggybacking on Mandrill's email API. Ndiri kufara kuona mamwe makambani anodhura achipinda mukutadza kana zvasvika pakutengesa email. Pane ino blog, semuenzaniso, isu tanga tichibhadhara zvakapetwa zvakapetwa kune yedu email sevhisi pane yedu kuratidzwa kwekutanga.
The Guubie Email Kushambadzira Platform inosanganisira:
Email Kushambadzira Campaigns - Gadzira email kushambadzira mishandirapamwe inonyatso kuendeswa kune vashandisi vako. Ita kuti vanhu vaverenge zvemukati mako uye vabate kuburikidza neemail uye masocial network. Tumira maemail anobata uye anotora maziso nemaemail anopindura.
Yakakwira Kununurwa - Unganidza Guubie kune yako yaunofarira kutumira email, seMandrill, MailJet, Amazon SES kana chero imwe SMTP. Semuenzaniso, kana iwe ukashandisa Mandrill, unogona kutumira kusvika ku12,000 maemail emahara pamwedzi.
Yepamberi Mishumo uye Stats - Shandisa yavo analytics inoshuma uye uibatanidze neGoogle Analytics pamushandirapamwe wega wega kuti ikupe ruzivo rwese rwakakodzera rwaunoda.
Zvirinani ROI neA / B Miedzo - Gadzira risingaperi A / B bvunzo kuti ikubatsire iwe kuona yakanyanya kushanda meseji yekuendesa kune vashandisi vako.
Bhurawuza & Mac OSX / Windows App - Uine browser yakajairwa seFirefox, Safari kana Google Chrome, unogona kuwana Guubie neese maficha, zvisinei kuti uripi munyika. Kana iwe uchida kuwanika kwenhare, unogona zvakare kurodha pasi iyo Guubie app yeMac OSX kana Windows.
Zvinokonzeresa zvinoenderana nezviito - unogona kugadzira zvinokonzeresa kutumira otomatiki zuva rekuzvarwa rakanaka kune vako vanyori kana kunyange yechipiri yekutambira email mazuva maviri mushure mekunge mushandisi agadzira account. Shandura mabasa ako ekutengesa.
API yevanogadzira uye kutanga - Guubie ine Powerful XML API, zvinoreva kuti vanogadzira vanogona kusanganisa mapuratifomu avo nemasevhisi neakaundi yavo yeGuubie.
ne Guubie, iwe unobhadhara imwe, yakaderera yegore mubhadharo… $ 59!
Tags: amazon seseguubieyakaderera mutengomandrill
Adphorus: Facebook Ad uye Yemagariro CRM Platform
Franchise Kushambadzira Boka
Sep 26, 2013 na4: 19 PM
59 madhirori pagore zvakachipa uye kana zvichishanda nemazvo kuba. Kuenda kuzotarisa mune izvi zvimwe asi zvinonakidza zvechokwadi.